प्र’धानमन्त्रीको अगाडी नै मन्त्री मस्त नि’दाए भिडियो भा’ईरल! (भिडियो सहित):: Mero Desh
प्र’धानमन्त्रीको अगाडी नै मन्त्री मस्त नि’दाए भिडियो भा’ईरल! (भिडियो सहित)
Published on: १९ चैत्र २०७७, बिहीबार ००:३२
काठमाडौं। प्रधानमन्त्रीको अगाडी नै मन्त्री मस्त नि’दाए भिडियो भा’ईरल! (भिडियो सहित) नेकपा ए’मालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारका एक मन्त्री कार्यक्रममै निदाएपछि आलोचित भएका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबको बार्षिक उत्सबमा सहभागी बनेका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङ ड्यासमा मस्त निदाए”।
प्रधानमन्त्री समेत स”हभागी भएको उक्त कार्य”क्रममा मन्त्रीहरु, दलका नेताहरु, सांसदहरुको सहभागीता थियो । कार्यक्रम जारी नै रहँदा मन्त्री गुरुङ भने ड्यासमा मस्त निदाए ।”राष्ट्रियसभा सदस्य कोमल ओलीका छेउमा बसे का मन्त्री गुरुङ कार्यक्रम जारी रहँदा मस्त निदाएका थिए ।
उनी निदाएपछि कार्यक्रममा सहभागी दर्शक को ध्यान उनी’माथि परेको थियो दर्शकले ध्यान मन्त्री निदाएको तर्फ दि’एपछि छेउको कुर्सीमा बसेकी ओलीले अ’सहज मह सुस गरिन् र उन लाई उठाउन खोजिन् । तर मन्त्री गुरुङले उठ्ने कुनै सं’केत गरेनन् । तर वलीले मन्त्री गुरुङलाई हात ले हल्लाइन् र गुरुङ निन्द्राबाट व्यूँझिए ।
उनीहरुले आफ्नो पदीय मर्यादा भूल्दा र बोल्दा गरेको गल्तीका कारण आलोचना सहनु परेको हो । केही समय अघि बोल्दा ध्यान नदिँदा तत्कालिन कानून मन्त्री शेर बहादुर तामाङले त राजीनामा नै दिनुपरेको थियो । त्यस्तै खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा पनि नेपालको सरकारको ठाउँमा श्री ५ को सरकार भनेका कारण आलोचित बने ।
वन मन्त्रीले बोल्दा होस नपु¥याउँदा आलोचना खेप्नु परेको थियो । उनले रुखले कार्बोनडाइ अक्साइड दिने भाषण दिएका थिए ।वनमन्त्रीले नै अक्सिजनको ठाउँमा कार्बोन डाइअक्साइड भनेपछि आलोचना भएको हो । त्यस्तै शिक्षा मन्त्रीले एक शैक्षिक कार्यक्रममा गरेको भाषण पनि सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेको थियो ।कार्यक्रम स्थलमा नै मन्त्री निदाए पछि अहिले सामाजिक सञ्जालमा यसबारे चर्चा चलिरहेको छ ।
यो पनि हेर्नुस् भिडियो हेर्न अझै तल जानुस् काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता बदर गर्ने फैसला चाँडै पुनरावलोकन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। एमाले र माओवादी ब्युँताउने फैसला विरुद्ध न्यायिक पुनरावलोकन गरेर फर्किने क्रममा।
संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले अदालतले उक्त निर्णय सच्याउनेमा आफूहरु विश्वास्त रहेको बताए।”हामी जनता को सेवक हौ हाम्रो पक्षमा निर्णय हुनु भनेको जनताको जित हुनु हो भनेर पटक पटक प्रचण्डले भन्दै आएका हुन्।
प्रचण्डले राजनीतिक स्थायित्वको लागि पनि अदालतले चाँडो यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। उनले भने।विगतमा पनि यस्ता मुद्दा पुनरावलोकन भएका छन्। एकताबद्ध भइसकेका दलहरुलाई विभाजित गर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले सच्याउनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं।’”
“रिट निवेदकले नै पार्टी एकता टुटोस् भन्ने मनासयले निवेदन दर्ता नगरेकोले सर्वोच्चको फैसला रिट निवेदकको चाहनाभन्दा बाहिरबाट आएको प्रचण्डको भनाई छ। ‘रिट निवेदकले पार्टी एकता टुटोस् भन्ने चाहेका थिएनन्, निवेदकको निवेदकको चाहनाभन्दा बाहिरबाट फैसला आयो,’ उनले भने।”
“उनले अदालतको फैसला अस्वभाविक र अप्राकृतिक भएको बताउँदै त्यसमा आफूहरुको असहमति रहेको बताए। ‘आज म पहिलोपटक अदालतको फैसला त्यो पार्टीको नामसम्बन्धी जुन फैसला भयो।”
“त्यो स्वभाविक, प्राकृतिक भएन राजीतिक प्रकृतिको भयो। त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्यो भनेर मैले निवेदन दर्ता गराएको छु,’ प्रचण्डले भने।”यो पनि नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफूलाई निलम्बन गर्ने अधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नभए को स्पष्ट पारेका छन् ।”
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल र एमाले उपाध्यक्ष रावललाई साधरण सदस्य समेत नरहने गरी निलम्बन गरेको थिए। उनलाई जानकारी दिँदै ओलीले पत्र पठाएपछि नेपालले आ’फूलाई हटाउने अधिकार ओलीसँग नभएकाे बताएका हुन् ।
ओलीले मलाई हटाए कोबारे कुनै जानकारी छैन।कुन पार्टी बाट?, ओलीको पार्टीबाट ? उनले रि’सिदै भने ।”नेता नेपालले केन्द्रीय कमिटीनै विघटन गरेका व्यक्तिले कारबाही गरेँ। भनेर हल्ला यसरी हल्ला फैलाउनु कुनै अर्थ नरहने बताए । ओली अहिले एमा’लेको नि’र्वाचित अध्यक्ष नै नरहेको दाबी गरे।”
नेपाल ओली विच पहिले देखिन नै टकराब चलि रहेको थियो। ओलीले पद उधारो नचल्ने नेता भन्दै एक आम सभामा दर्शक हसाँएका थिए। “यता नेता भिम रावल भन्छन काठमाडौ एमाले नेता भीम रावलले पार्टीबाट निलम्बन गर्ने ।
प्रधानमन्त्री।”तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को नि’र्णय पूर्णरूपमा अ’स्वीकार गर्ने बताए।का छन् स्प’ष्टिकरण चित्तबुझ्दो नदिएको भन्दै ओली ले सोमबार नेताहरू माधवकुमार नेपाल र भीम रावललाई पार्टीबाट ६ महिनाका लागि नि’लम्बन गर्ने नि’र्णय गरेका थिए ।।